Etu esi achota ihu odida ala | Martech Zone
Etu esi achota ihu akwukwo
Naanị obere mgbanwe mgbanwe na peeji ọdịda gị nwere ike ibute nsonaazụ kacha mma maka azụmaahịa gị. Ibe ndabara bu ebe anakpo oku gi ime ihe na uzo mgbanwe ebe onye obia ma obu onye ndu ma obu itughari. Ndị a bụ ụfọdụ isi ihe dị na peeji nke kachasị mma. Buru n'uche na anyị abụghị naanị na -eche ihu na peeji nke maka search engines, anyị na-na-na peeji nke maka mgbanwe, kwa!
Peeji Mbụ - a ga - egosipụta aha peeji gị na nsonaazụ ọchụchọ na mmekọrịta mmadụ na ibe na ọ bụ ihe kachasị mkpa nke ibe ahụ ịrata mmadụ ka ọ pịa. Họrọ isiokwu na-akpali akpali, debe ya n'okpuru mkpụrụ edemede 70, ma gụnye nkọwa siri ike maka ibe - n'okpuru mkpụrụedemede 156.
URL - N'ihi na URL gị gosipụtara na nsonaazụ ọchụchọ, jiri obere slug dị nkenke, nke dị nkenke, kọwaa mkpọsa ahụ.
aga - nke a bụ ihe kachasị ike na ibe maka ịrata onye ọbịa gị ịga n'ihu na mezue ụdị ahụ. Ibe ọdịda dị ka enweghi ihe nchọgharị yana… ịchọrọ ka onye na-agụ ya lekwasịrị anya na usoro ahụ, ọ bụghị nhọrọ. Jiri okwu ndị na-eme ka onye ọbịa mee ihe ma gbakwunye echiche nke ịdị ngwa. Lekwasị anya na uru onye ọbịa ga-erite site na ịmebanye ndebanye aha ya.
Ịkekọrịta Ahịa - tinye bọtịnụ mmekọrịta. Ndị ọbịa na-ekekọrịtakarị ozi na netwọkụ ha. Otu ihe atụ bụ ihe omume ndebanye peeji nke… mgbe ị na-edebanye aha maka ihe omume, ị na-achọkarị ka ndị ọzọ nọ na netwọkụ gị gaa mmemme ahụ.
Image - na-agbakwunye ihe nlele nke ngwaahịa, ọrụ, akwụkwọ akụkọ, ngwa, ihe omume, wdg. Bụ ihe nlele nke ga-eme ka ntughari dị na peeji nke ọdịda gị.
content - Debe ọdịnaya gị na peeji nke ọdịda gị dị nkenke yana ruo n'isi. Elekwasịla anya na atụmatụ na ịnye ọnụahịa, kama lekwasị anya na uru elezigharị fọm ahụ na itinye ozi gị. Jiri ndetu edetu, mkpụrụ akwụkwọ nta, okwu gbara ọkpụrụkpụ na italic iji mesie ike.
Testimonial - tinye ihe akaebe sitere na mmadụ ma tinye ihe oyiyi nke onye ahụ na-agbakwunye eziokwu na onyinye ahụ. Gụnye ndị ha bụ, ebe ha na-arụ ọrụ, na elele ha rụzuru.
ụdị - ahụ obere ubi na mpempe akwụkwọ gị, ka ị ga-emekwu mgbanwe. Mee ka ndị mmadụ mara ụdị ozi ịchọrọ, ihe kpatara ị ji chọọ ya na otu ị ga-esi jiri ya.
Ubi Zoro ezo - jide ozi ndị ọzọ gbasara onye ọbịa ahụ dịka isi mmalite, ozi mkpọsa, okwu ọchụchọ ha jiri yana ozi ọ bụla nwere ike inyere gị aka ịkwado ha dị ka onye ndu ma gbanwee ha ka ọ bụrụ ndị ahịa. - Pinye data a na nchekwa data ndu, usoro akpaaka ahịa ma ọ bụ CRM.
Legal - ị na-anakọta ozi nkeonwe ma kwesiri inwe nkwupụta nzuzo yana usoro ojiji iji kọwaa nke ọma, n'ụzọ zuru ezu, otu ị ga-esi jiri ozi ndị ọbịa ahụ.
Lee isiokwu ndị metụtara ya nke nwere ike ịmasị:
Olee otú ahu nagide Keywords n'ụzọ dị irè
Otu esi eme ka ihu akwukwo di nma Chọọ mpaghara
Esi ebuli a Vidiyo Youtube
Esi ebuli gị Mkpado Aha
Esi ebuli a blog Post
Tags: njikarịcha ntụgharịmgbanweụdịọdịda pageọdịda peeji nkeọdịda peeji nke njikarịcha-enyeebuli a na peeji nke ọdịdandebanye aha njikarịcha
Nov 7, 2012 na 10:56 PM
Ọ bụ ezie na echere m na nhazi a ga-abụ mmalite mmalite maka ụfọdụ ụlọ ọrụ, maka ndị ọzọ, nke a ga-enwe nnukwu ụzọ na-aga. Nanị ụzọ ị ga-esi mata nke ọma bụ ule A / B.
Nov 30, 2012 na 5:39 AM
Ọmarịcha post! Nke a bụ ihe bara uru ịgụ m na-ekele ya nke ukwuu. Ezigbo ọrụ.